Shrkii Madaxda dowlad goboleedyada oo furmay | KEYDMEDIA ONLINE
Shrkii Madaxda dowlad goboleedyada oo furmay
Shir u dhaxeeya shanta Madaxweyne ee Dowlad goboleedyada ayaa hadda ka furmay xarunta Xalane, halkaasoo diiradda ay ku saarayaan sidii lagu dhammeyn lahaa wada-hadaladii hakadka ku yimid!
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ee kala ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Puntland iyo Jubbaland ayaa hadda si rasmi ah uga furmay hotel ku yaal xerada Xalane, halkaasoo la filayay inuu ku qabsoomi doono shirka madaxda dowla goboleedyada dalka.
Shirkan Dowladdaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah maanta uga qabsoomay xerada Xalane, waxaana looga hadlayaa xaaladda uu dalku marayo gaar ahaan arrimaha Doorashada iyo xal u helista caqabadaha hortaagan qabsoomida Shirkii loo balansanaa ee doorashada.
Beesha Caalamka ayaa dadaal dheer u gashay in ay isku yimaadaan shanta madaxweyne goboleed, inkastoo madaxweyne Farmaajo uu aad u diidanaa shir uu isagu ka maqan yahay in saddexda madaxweyne ee saaxiibka la ah ay la galaan maamul goboleedyada uu la dirirsan yahay ee Jubbaland iyo Puntland.
Waxaan idiin soo gudbin doonaa wixii wara ee kusoo kordha shirkan iyo natiijada laga gaaro, iyadoo xaaladda maanta uu dalku marayo ay tahay mid wal-wal xoog leh laga muujinayo, iyadoo Golasha Shacabka BJFS uu u fadhiyo kulan dood weyn dhaliyay!